Inkinga ngeWebhu 3.0 Iqhubeka | Martech Zone
Ukuhlukanisa ngezigaba, ukuhlunga, ukumaka, ukuqoqa, ukubuza imibuzo, ukufaka izinkomba, ukuhlela, ukufometha, ukugqamisa, ukuxhumana ngenethiwekhi, ukulandela ukuhlanganisa, ukuthanda, ukuthumela i-tweeting, ukusesha, ukwabelana, ukubekisa, ukumba, ukukhubeka, ukuhlunga, ukuhlanganisa, ukulandela umkhondo, ukubalula… kubuhlungu impela.
0 Web: Ngo-1989 uTim Berners-Lee we-CERN uphakamisa i-Internet evulekile. Iwebhusayithi yokuqala ivela ngo-1991 ngeWorld Wide Web Project.
1.0 Web: Ngo-1999 kunamawebhusayithi ayizigidi ezi-3 nabasebenzisi abazulazula ngokuyinhloko ngama-word-of-mouth nezinkomba ezifana ne-Yahoo!
2.0 WebNgo-2006 kunezindawo eziyizigidi ezingama-85 kodwa izingosi zokuxhumana, ama-wikis kanye nezinkundla zokuxhumana ziqala ukwakheka lapho abasebenzisi bangabamba iqhaza khona ekuthuthukiseni okuqukethwe.
3.0 Web: Ngo-2014, kunamawebhusayithi angaphezu kwezigidigidi akhona anezinhlelo zokucinga nokuxhumana ezihlakaniphile, ikakhulu ngenxa yokuthi ahleleke kahle futhi amakwa ngobuchwepheshe kubathengi, izinkomba, kanye nokuthola imininingwane yabasebenzisi.
4.0 Web: Singena esigabeni esilandelayo se-Inthanethi lapho konke kuxhunywe khona, amasistimu azifundela wona, izidingo zenziwe zaba ngezakho futhi zenziwe zaba ngcono, futhi iwebhu iba nokwelukiweyo ezimpilweni zethu njengoba ukwabiwa kwamandla kwenziwa esikhathini esingaphezu kwekhulu leminyaka elidlule.
Ngabikezela ukuthi u-2010 uzoba unyaka ka ukuhlunga, ukwenza ngezifiso, nokwenza kahle. Namuhla, anginaso isiqiniseko sokuthi sisondelene namanje - kungenzeka ukuthi siseneminyaka siphumile. Okusemqoka wukuthi siyayidinga manje, noma kunjalo. Umsindo usuvele uvala izindlebe.
Ukukhangisa kohlelo, ubuhlakani bokufakelwa, kanye nokufundwa kwemishini konke kusatshalaliswa efwini ukuzama ukuthuthukisa ukubaluleka nokuqondiswa kokuxhumana. Okusemqoka ukuthi bonke lobu ubuchwepheshe obusetshenziswe izinkampani ukulawula ukuxhumana kumsebenzisi wokugcina. Lokhu kubuyela emuva ngokuphelele… sidinga amasistimu lapho umsebenzisi angalawula kalula imininingwane abondliwe ngayo nokuthi bayondliwa kanjani.
IGoogle ineminyaka engama-20 futhi isengu- a search engine, ikunikeza kuphela idatha eyizimungulu ekhonjwe kumagama angukhiye afana nemibuzo yakho. Ngingathanda ngempela umuntu akhe ifayili le- thola injini okulandelayo… Ngikhathele ukusesha, angithi? Ngiyethemba, i- ukwamukelwa ngobuningi kobuchwepheshe bezwi izoshayela izinto ezintsha kule nkundla - angicabangi ukuthi abathengi bazoba nesineke kakhulu bajikeleze ngemiphumela eminingi ukuthola leyo abayifunayo.
Izinkampani ezinjengeFirefox, iGoogle neApple zingasiza. Ngu ukwenza iphutha Ukulandela umkhangiso kukhutshaziwe lapho ifakwa, ibeka umthwalo ezandleni zomsebenzisi. Njengomakethi, kungazwakala njengamantongomane kimi ukufuna abathengi namabhizinisi bayeke ukungilalela. Kepha uma ngingenandaba futhi ngicasula, yilokho impela okufanele bakwenze. Abakhangisi basalokhu behluleka njalo ukuthumela umlayezo kuwo wonke umuntu bese behlukanisa futhi belungisa umyalezo.
I-GDPR nayo ingasiza. Angazi ukuthi umthelela waba yini i-GDPR yokuqala imiyalezo yokungena ezinkampanini, kodwa nginomuzwa wokuthi ibibuhlungu kakhulu. Ngenkathi ngikholelwa ukuthi yayinzima, kuzokwenza ukuthi abathengisi abangcono bakhiqize kithi. Uma ngabe besikhathazeke ngokweqiniso ngayo yonke imilayezo ebesiyithumela, lapho siyithumela, kanye nenani elethwe kulowo nalowo mathemba noma kumakhasimende - ngiyaqiniseka ukuthi sizothumela ingxenyana yawo. Futhi uma abathengi bengaqhunywanga ngamabhomu, kungenzeka bangaphoqi umthetho onzima onjengalona.
Ngicabanga ukuthi izinkampani zobuchwepheshe ezilalela futhi ziphathe amathemba namakhasimende ngenhlonipho ebafaneleyo, ukuqinisekisa ukubaluleka ngezokuxhumana, ekugcineni bazoba ngabanqobi beWeb 3.0. Ngaphandle kwalokho, singena kwiWebhu 4.0 (i-Intanethi Yezinto) ngaphandle kwenetha lokuphepha.
Tags: ukuhlanganisaibhukumakaUkuhlukanisa ngezigabaukuqoqaukumbaukuhlungaokulandelayoukufomethaukugqamisainkombaukuthandaukuxhumanaukubuzaukuseshaiwebhu ye-semanticUkwabelanaukuhlungaukwakhaukukhubekaukumakatweetingIwebhu ye-3Iwebhu ye-3.0
Yini imvamisa ye-Ideal Text Messaging?
May 11, 2010 ku-5: 55 AM
Ngizamile ukukwakha injini yokuthola. Esikhundleni sokuthembela kumakhompyutha ukuhlunga idatha engahlelekile efanelekile kuwe, injini yokuthola incike kwinethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu.
Ukugcwala ngokwegama elingukhiye kudale isilo senkimbinkimbi sikaFrankenstein. Manje akwanele ukuthi ibhizinisi elincane libe newebhusayithi, kufanele babe nochwepheshe be-SEO abakha okuqukethwe kwabo nemethadatha yokujabulisa ubuchule be-Google. Ubuhlanya lobu.
Ngethemba ukuthi ubuchwepheshe besikhathi esifanele kufaka phakathi okwami ​​kuzokusiza ukuthi uthole * okufunayo, lapho ukufuna khona futhi singaphunyuka esihogweni samagama asemqoka.
Phendula uma ufuna ukwazi kabanzi. Angifuni ukukugaxela ngegama lenkampani yami noma iwebhusayithi. Konke kumayelana ne- "opt-in".
May 11, 2010 ku-9: 43 AM
Angikholwa ukuthi awunginikanga nesingcaphuno 😉
May 11, 2010 ku-4: 32 PM
Uke wezwa ngoWolfram Alpha? (http://www.wolframalpha.com/) Leyo "injini yokuthola."
May 13, 2010 ku-7: 48 AM
Sawubona Cassie! Ngicabanga ukuthi uWolfram nakanjani uyindlela efanele!
Angivumelani nhlobo. Yebo, idatha inamandla uma usebenzisa amasu ezibalweni zendabuko ezinkingeni ze-semantic. IGoogle iyakwenza lokhu - okuholela emsileni omude wemiphumela nakubasebenzisi abakhungathekile.
Izinkambu ezivelayo ze-heuristics eziguquguqukayo zisebenza kakhulu kuma-semantics kunalokho okuxoxwa ngakho kuvidiyo.
Okuningi okulandelayo… Siyasebenza ngakho manje.